OGM Achabereka Vangangoita 122 High Chikoro Chekupedzisira | RayHaber | raillynews
mushaGENERALMabasaOGM Inozobvunza Vanosvika 122 High Chikoro Yevakapedza
15 / 05 / 2020 Mabasa, GENERAL
ogm achaita chero epamusoro chikoro vanopedza zveruzhinji vashandi
Iko kushambadzira kwakaburitswa neDirector Directorate yeMasango. Chirevo chakaburitswa pasi pemusoro wakanzi “Ministry of Agriculture and Forestry, General Directorate of Forestry, 2020 chibvumirano chevashandi vanozivisa basa” chakataura kuti vashandi vanosvika gumi nevaviri vevashandi vanozoverengerwa pakati pevachapinda chikoro chesekondari.
Kusangana nemamiriro ezvinhu akataurwa muchinyorwa 657 cheMutemo Nhamba 48,
Ndichiri kushanda mumamiriro evashandi vane chibvumirano maererano nendima (B) yeChinyorwa 657 cheMutemo Nhamba 4; Vashandi veMvumo vanoisa basa mundima (B) yeChinyorwa 1 cheMutemo Nhamba 657 uye neDanho reKanzuru yeVashandi iri 4 uye nezvevaya vane zvibvumirano zvebasa zvapera kana avo vakanyorera kuti vaiswe munzvimbo dzakabvumiranwa. Izvo zvinofanirwa kutorwa mupfungwa kuti zvinopihwa mundima yechitatu neyechina yeAsix 6.6.1978 yeZvirevo Zvinechekuita neChirangaridzo ichashanda. Avo vanoiswa muzvinzvimbo izvi havazogadzwa avo vasingawire mukati mechikamu chekubudiswa chakatsanangurwa mundima yechitatu neyechina yeAnfesi Article 7 yeZvirevo Zvinechekuita neKushanda kweVashandi Vakabvumidzwa.
Zvishandiso zvevaya vasingatakure kana kunyora zvinyorwa zvakataurwa hazvigamuchirwe. Pamusoro pezvo, zvibvumirano zveavo vanonzwisiswa kuti vane mapepa ekunyepera / asina kukodzera akapihwa navo chero zuva uye kuti ivo vagadzirira gwaro renyepa vachasangana nemutemo pamusoro pavo, kunyangwe chibvumirano chakasainwa uye ndokutanga kushanda, uye mubhadharo uyu unobhadharwa nemubvumo wepamutemo.
KUSHANDISA ZVAKANAKA TERMS
Kuve wagamuchira chiyero chidiki che2018 muKPSSP3 uye KPSSP94 mapoinzi, kusanganisira boka reKPSS (B) muna 60,
Kusava anopfuura makore makumi matatu nematanhatu kubva pazuva rekupedzisira rekunyorera,
Kune avo vakapedza kudzidza kubva kumunda chero wechikoro chesekondari uye vanoshanda pachinzvimbo cheRutsigiro rweVashandi (Mutyairi);
Kuve neC-kirasi rezinesi,
Kune avo vanonyorera chinzvimbo chegweta;
Kuve negweta rezenisi
TCDD inotenga zvidzidzo zvevashandi vekuchikoro chepamusoro
TCDD Chikoro chePuraimari Chikoro Chevashandi veHurumende Vakaremara Rakaparidzirwa Procurement ziviso!
TCDD Pachikoro Chesekondari Vakapedza kudzidza 363 Chirongwa chekuchera vashandi (Applications Start)
TCDD Chikoro chesekondari Chikoro chekudzidza chichati chichange chichitsvaga vashandi vekare
TÜVASAŞ achange achitsvaga vatori vechikoro vanopedza chikoro chepamusoro, vatungamiriri nevadzidzisi
TÜVASAŞ High School Vakapedza Kudzidza vachatora vashandi ve26!
TÜVASAŞ High Chikoro Vakapedza Kudzidzisa Vanozogara Vashandi
TCDD chikoro chesekondari uye chikwata chekudyidzana chikoro 108 inotanga kushandiswa kwekugadzirira kushandiswa
TCDD Inoramba Ichichera Vashandi vekuda chikoro chesekondari
TÜDEMSAŞ chikoro chesekondari chikoro 20 inoshandisa vashandi vasingagumi
TÜDEMSAŞ Minimum High School Vakapedza Kudzidza Vashandi Kuwana Applications Rambai
TÜVASAŞ Nechechikoro chepamusoro Chikoro chepamusoro chevashandi vechikoro 40 Vashandi
TÜVASAŞ Chikoro Chikoro chepamusoro Chikoro chepamusoro cheHNUMX Staff Recruitment Process yakatanga
TCDD Inoita Vashoma Vechikoro Vechikoro Vakapedza Kudzidza Vanotenga neKPSS Score
Kushanda Kunoenderera kune Yekutanga Dzimba MR Chigadzirwa
Dziviriro yemhepo Kutanga Kuzivisa uye Command Command System (HERIKKS)
TÜVASAŞ High School Vakapedza Kudzidza Technician Buying
TÜVASAŞ High School Vakapedza Kudzidza Vashandi 26 Recruitment Applications Vakatanga!
EGM, TCDD uye Land Registry Cadastre KPSS Paun Kuita Vashandi Vehurumende